भारतसहित ४ मुलुकका विदेशी पाहुना सहभागी हुने, अन्य २५ देशले पठाए शुभकामना सन्देश- समाचार - कान्तिपुर समाचार
भारतसहित ४ मुलुकका विदेशी पाहुना सहभागी हुने, अन्य २५ देशले पठाए शुभकामना सन्देश
काठमाडौँ — नेकपा एमालेको १० औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा भारत, बंगलादेश, श्रीलंका र कम्बोडियाका ८ राजनीतिक दलका नेताहरू सहभागी हुने भएका छन् । चीनलगायत अन्य २५ देशका दलहरूले भने शुभकामना सन्देश पठाएका छन् । एमालेको विदेश मामिला विभागले बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै शुक्रबारदेखि हुने राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सहभागी हुने विदेश पाहुनाका विषयमा जानकारी दिएको हो ।
एमालेको महाधिवेशन शुक्रबारदेखि चितवनमा हुँदैछ । विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले चार देशका ८ वटा राजनीतिक दलका १५ जना पाहुना महाधिवेशनमा सहभागी हुने जानकारी दिए ।
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी)सहित पाँच दलका प्रतिनिधिले महाधिवेशनमा भाग लिने भएका छन् । बीजेपीका तर्फबाट पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री डा. हर्षबर्द्धन र राष्ट्रिय सचिव हरिश द्विवेदी काठमाडौं आइपुगेका छन् । त्यस्तै, भाकपाबाट पल्लव सेन गुप्ता, भाकपा मार्क्सवादीबाट जोगेन्द्र शर्मा, भाकपा मार्क्सवादी लेनिनवादी लिब्रेसनबाट वीरेन्द्रप्रसाद गुप्ता र सन्दीप सौरभ आउने नेता भट्टराईले बताए । त्यस्तै, श्रीलंकाबाट जनता भिमुक्ति पेरामुना पार्टी (जेभीपी) का भिजेथा हेराथ सहभागी हुनेछन् ।
कम्बोडियाबाट सुस याराको नेतृत्वमा चार सदस्यीय डेलिगेसन टोली आउनेछ । बंगलादेश कम्युनिष्ट पार्टीको तर्फबाट हसन तारिक चौधरीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय पाहुना टोली काठमाडौं आइपुगेको छ । एमालेले विदेश पाहुनाहरूलाई काठमाडौंमा सोल्टी होटलमा राख्ने व्यवस्था मिलाएको छ भने चितवनमा ग्रीन मेनसन होटलमा पाहुनाहरूको बसोबासको व्यवस्था मिलाएको छ ।
नेता भट्टराईले महाधिवेशन सफलताको कामनासहित विभिन्न २५ देशबाट शुभकामना सन्देश प्राप्त भएको जानकारी दिए । कोरोनाका कारण चीनबाट प्रतिनिधिमण्डल आउन नसकेको उनले बताए । ‘चीन हाम्रो नजिकको छिमेकी मुलुक हो । पार्टीगत रुपमा पनि चीनसँग हाम्रो सघन र सुमधुर सम्बन्ध छ । तर, उहाँहरू कोरोनाकै कारण आउन नसक्ने बताउनुभएको छ । अन्य कारण छैन । यसपटक कोरोनाकै कारण धेरै देशहरूले शुभकामना सन्देशमात्रै पठाएका छन्,’ भट्टराईले भने ।
प्रकाशित : मंसिर ९, २०७८ १६:२४
१२१ कम्पनीको सेयर मूल्य घट्यो
काठमाडौँ — साता कारोबारको अन्तिम दिन बिहीबार सेयर बजारको परिसूचक नेप्से ३. २२ अंकले घटेको छ । सो अंकको कमीसँगै परिसूचक २७३१ अंकमा कायम भएको छ । कारोबार रकम पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा घटेको छ ।
३ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । बुधबार ४ अर्ब २१ करोडको कारोबार भएको थियो । बिहीबार ६१ कम्पनीको मूल्य बढ्दा १२१ कम्पनीको मूल्य घट्यो । ५ कम्पनीको मूल्य स्थिर रह्यो ।
बैंकिङ ९, होटल तथा पर्यटन २५ र अन्य उपसमूह १९ अंकले बढे । तीबाहेकका अरु सबै समूह घटेका छन् । विकास बैंक ७०, फाइनान्स २, जलविद्युत २७, जीवन बीमा २३, उत्पादन २९, माइक्रोफाइनान्स ५१, निर्जीवन बीमा १५६ र ब्यापार समूह ४३ अंकले घटेका छन् ।
समृद्धि फाइनान्सको मूल्य सबैभन्दा बढी ९.२ प्रतिशत तथा सामलिङ पावरको मूल्य ८ प्रतिशतले बढ्यो । मानुसी लघुवित्तको मूल्य करिब ७ प्रतिशतले घट्यो । कारोबार रकमका आधारमा नेपाल टेलिकम अग्रस्थानमा रह्यो । सो कम्पनीको २६ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भयो ।
प्रकाशित : मंसिर ९, २०७८ १६:१६